घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू एंजेलिनो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्यहरू
हाम्रो एन्जेलिनोको जीवनी उनको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, प्रेमिका / पत्नी हुन बच्चा, जीवन शैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थ को बारे मा तथ्य प्रस्तुत गर्दछ।
सरल शब्दहरूमा, हामी तपाईंलाई स्पेनिश फुटबलरको यात्रा प्रस्तुत गर्दछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरुबाट शुरू हुन्छ, जब उनी RB Leipzig सँग प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालेरीमा उनको बाल्यकाल हेर्नुहोस् - एन्जेलिनो बायोको एक उत्तम सारांश।
धन्यवाद जुलियन नागल्समन, कडा परिश्रम गर्ने - एन्जेलिनो २०२० देखि अपरिहार्य भयो युरोप मा सब भन्दा रोमाञ्चक बाँया पछाडिको रूपमा। यद्यपि हामीले याद गरेका थोरै फ्यानहरू मात्र स्पेनीको जीवन कहानीसँग परिचित छन्। हामीसँग यो सबै तपाईंको लागि तयार छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
एंजेलिनो बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, फुटबलरले पूरा नाम राख्छ; जोस एन्जेल एसमोरिस तासेन्डे। अझ, एन्जेलिनो मात्र एक उपनाम हो। उहाँ जनवरी १41997। को th औं दिनमा आफ्नो आमा, सोनिरा तासेन्डे अनन र एक अज्ञात पिताको, उत्तर पश्चिमी स्पेनको कोरिस्टन्को नगरपालिकामा जन्मनुभएको थियो।
घट्दो बाँया पछाडि आफ्ना बाबुआमाको बीच मिलनबाट जन्मेका दुई बच्चा मध्ये सबैभन्दा जेठो हो। अनुसन्धानबाट गरिएको नतिजाले उसलाई एकल आमाले हुर्काएको कुरा दर्शाउँदछ जुन उसको शुरुको दशकमा देखिन्छ। हामीलाई के थाहा छ, सोनिरा तासेन्डे अनन सुन्दर छिन् र एन्जेलिनोले आफ्नो समानता लिएकी छिन्।
Soneira Tasende Anon भेट्नुहोस्। उनी एन्जेलिनोको सुन्दर आमा हुन्।
टेक्निकल ड्रिब्लरको कान्छो भाई छ जसको नाम दानी तासेन्डे छ। राम्रो पुरानो दिनहरूमा, एन्जेलो एक खुशीको बच्चा थियो जसले जीवनको चिन्ताहरूको कम चिन्ता गर्थ्यो। बरु, ऊ फुटबलको लागि गहिरो प्रेम थियो र आफ्नो सानो भाइ, दानी तासेन्डेसँग समय बिताउन रमाईलो गर्दछ। तिनीहरू सही आफ्नो बाल्यावस्थाको दिनहरु मा प्यारा लाग्छ?
ती दिनहरू उनीहरूको करिस्टन्को छिमेकमा, एन्जेलिनो र दानी एक शक्तिशाली ट्याग टीम गठन गर्दछन्। तिनीहरू सँगै मिलेर सडक फुटबलमा आफ्ना साथीहरूलाई पराजित गरे। दुबै भाइहरूले बललाई सम्हाल्ने क्रममा शान्ति पाए, यो एउटा कारनाम जुन पछि पछि गयो।
एन्जेलिनो परिवार पृष्ठभूमि:
सुरुबाट नै, सोनिरा तासेन्डे अनोनले आफ्ना दुई छोराहरू भोकाएको वा ध्यान नहुने सुनिश्चित गरिन्। उनी एक परिश्रमी महिला थिइन् राम्रो आर्थिक शिक्षाका साथ। त्यो तथ्यले उनको परिवारलाई स make्घर्ष गर्न सकेन। यसैले, एक मध्यम-वर्गको घरको संचालनले सोनिरालाई कम खर्चिलो एकेडेमीमा एन्जेलिनो र डानी भर्ना गरिरहेको देखे। यस्तो आय र खर्च को एक राम्रो सन्तुलन interms सिर्जना।
एन्जेलिनो परिवार उत्पत्ति:
शुरुवातकर्ताहरूको लागि, स्पेनिश जीनियस स्पेनको गलिसियाको ए कोरुना प्रान्तबाट आउँदछ। एन्जेलिनोको गृहनगर अटलान्टिक महासागरले उत्तर र पश्चिममा घेरेको छ। नक्शामा देखाईएको छ, उनको परिवार बीच छ २.2.4 मिलियन मानिस जसले ग्यालिसियन भाषा बोल्छन्।
यदि तपाईंलाई थाहा थिएन, एन्जेलिनोको परिवार कहाँबाट आएको हो Playa de Riazor को घर हो। यो युरोपको सब भन्दा राम्रो शहरी समुद्री तट हो। सुन्दर तटवर्ती वर्षमा लगभग cru२ क्रूज जहाजहरू प्राप्त हुन्छन्। आजको दिनसम्म, Playa de Riazor रेस्टुरेन्ट, ह्यामॉक, खेल सुविधाहरू, इत्यादि संग पूर्ण रूपमा सुसज्जित छ।
एन्जेलिनो अनटोल्ड फुटबल कहानी:
रोमाञ्चक बल ह्यान्डलरले आफ्नो अभियानलाई प्रारम्भमा आफ्नो देशवासीको रूपमा शुरू गरे, पेड्री गोन्जालेज। जब एन्जेलिनोले आफ्नो th औं जन्मदिन मनाए, उनका अभिभावकहरूले उनलाई एकेडेमीमा राख्ने उत्तम तरिकाको बारेमा सोचे।
तसर्थ, तिनीहरूले उहाँलाई लुइस क्याल्भो सान्जमा भर्ना गरे, जुन कम खर्चिलो थियो। त्यहाँ, उनले आफ्नो बाल्यावस्थाको अधिकांश भाग फुटबलमा आधारभूत रणनीतिहरू सिकेर बिताए।
दिनचर्यामा, एन्जेलिनोकी आमा काम पछि एकेडेमीबाट उनलाई टिप्न जान्थे जब पनि उनका प्रशिक्षण सत्र समाप्त हुन्छन्। छ बर्षको लागि, भविष्यको ताराले उही तालिकाको अवलोकन गर्यो जसले उनलाई दर्ता माथि बढिरहेको देखे।
जसरी एन्जेलिनो उमेर ढल्कँदै गए, उनकी आमाले (सोनीरा तासेन्डे अनन) उनलाई अधिक सुसज्जित एकेडेमीमा भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिए। कुनै ढिलाइ नगरी, उनले उनलाई २००or मा उनको १० औं जन्मदिन पछि Deportivo La Coruna मा हस्तान्तरण गरे।
पक्कै पनि, पखेटामा उनको भूमिकाको आदी हुन सजीलो थिएन। जे होस्, एन्जेलिनोको प्रगति र सीप र चपलताको प्रगति प्रत्येक बिउँदो दिनमा बिस्तारै आयो। साथै, उसको नयाँ एकेडेमीमा अन्य युवा प्रतिभाहरूको उपस्थितिले उसको ठूलो उत्साहको लागि सफलताको लागि ठूलो उत्साह बनायो।
एन्जेलिनोको जीवनी - फेम कहानीको लागि मार्ग:
समयमा, प्रशंसनीय स्टारले आफ्नो जन्मजात फुटबलको शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो। यो धेरै क्लबहरु आफ्नो सेवा माग्छन्। आफ्ना बाबुआमासँग वार्ता पछि, म्यानचेस्टर सिटी २०१२ मा जवान केटामा हस्ताक्षर गरे।
दुर्भाग्यवस, एन्जेलिनोले EPL टीमको लागि प्रदर्शन गरेनन् धेरै loanण मन्त्रमा उनलाई पठाएको अघि। सुरुमा उनी न्यु योर्क शहरको साथमा सामेल भए फ्रैंक लम्पर्ड। पछि, उनी छोटो समयको लागि गिरोनामा सरे।
उसको loanण स्पेल जारी रह्यो किनकि उनले मल्लोर्का र एनएसी ब्रेडाका लागि संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गरे। त्यहाँ उनले फुटबलको दुनियामा ट्र्याक्सन प्राप्त गर्न शुरू गरे। जुन २०१ 2018 मा, भविष्यको लागि केटाले PSV आइन्डहोभनसँग पाँच-बर्ष अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरे। आफ्नो पहिलो वर्ष मा, उनी सीजनको प्रतिभा बने।
एन्जेलिनो बायो - सफलता कहानी:
उसको रक्षात्मक र आपत्तिजनक स्वभावको साथ, पेप Guardiola स्पेनीलाई आफ्नो टीममा फिर्ता ल्याउन आवश्यकता महसुस गरे। यसैले, उनले २०१२ मा एन्जेलिनोलाई म्यान सिटीमा पुन: हस्ताक्षर गरे। मनपराउनेहरूको साथ फिचर गर्दै एरिक गार्सिया उनको नाम अ football्ग्रेजी फुटबल प्रेमीहरु बीच अझ लोकप्रिय बनायो।
आफ्नो पक्ष को लागी धेरै surplus को रूप मा देखियो, पेप Guardiola एन्जेलिनोलाई आरबी लाइपजिगमा loanण दिने निर्णय गरियो। को मार्गदर्शन बाट जुलियन नागल्समन, उनी पिचमा असाधारण भए - पेपको अपेक्षाहरू भन्दा ठूलो।
जब म यो बायो लेख्छु, लाइपजिग गैलिसियन गहना किन्न बाध्य छन् किनभने उनीहरूले यो कन्फ्युसियस रहुन्जेल सपना देखेका छन् कि त्यो बचाउपूर्ण स्वभावका लागि सबै थन्टहरू।
यदि तपाईं अझै सोच्दै हुनुहुन्छ कि किन फुटबल विश्वले उनलाई २०२० को सबैभन्दा अपमानजनक डिफेन्डर भन्यो, तलको भिडियो क्लिप हेर्नुहोस्। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
एन्जेलिनो प्रेमिका / पत्नी:
आफ्नो टीमका साथीको तुलनामा डेन ओल्मो, बायाँ-पछाडि सन्तुलित सम्बन्ध जीवनको विकासमा गएको छ। आफ्नो ख्याति वृद्धि देखि, एन्जेलिनो उनको प्रेमिका, रोसियो गलिंडा डेट गर्दै छ। उनी एक दुर्लभ सुन्दरता हुन् जसले एक व्यक्तिसँग फोटो खिच्न रमाईलो प्राप्त गर्छिन् जसले उनलाई उनको पत्नी र आफ्ना बच्चाहरूको आमाको रूपमा स्वीकार गर्छन्।
एक खुशी Rocio गैलिंडा। उनी आफ्नो मान्छेलाई धेरै माया गर्छिन्।
के अधिक छ? ... एन्जेलिनो उनको चाँडै नै पत्नी हुन गाँठो बाँधेर काम गर्दैछ। उहाँ आफ्नी प्रेमिकासँग मात्र खुशी हुनुहुन्न, उहाँकी आमा र भाइले पनि दम्पतीहरूलाई उनीहरूको सय प्रतिशत समर्थन गर्नुभयो। ईर्ष्यालु नहुनुहोस् यदि म तपाईंलाई भन्छु कि एन्जेलिनो आफ्नो भावी पत्नीसँग फिफा खेल्छन्।
रोसियो गलिंडा आफ्ना पतिसँग फिफा खेल्दैछिन्। त्यो सुन्दर छैन?
जे होस् उहाँ अझै आफ्नी प्रेमिका (रोसियो) सँग विवाहित हुनुहुन्न, जोडीले एक प्यारो बच्चाको सट्टा जन्मायो। निस्सन्देह, जीवन अब डिफेन्डरको लागि यति सुन्दर छ कि ऊ बुबा र आफ्नो परिवारको रोटी दिने दुवै हुन्छ।
एन्जेलिनोको जीवनी - उनको व्यक्तिगत जीवनमा एक नजर:
के गर्छ लाइपजिगबाट सानो राक्षस रक्षक र आक्रमणकारीहरूमा एकसाथ डराउने डरबाट यति अनौंठो? सुरुमा, उहाँको व्यक्तित्व मकर राशिको स्वभावको मिश्रण हो। आफ्नो कुंडलीको आधारमा, एन्जेलिनोले हास्यको ठूलो भावना पाएको छ।
बोरियतको सामना गर्नुपर्दा ऊ खुशीको वातावरण स्थापित गरेर आफ्ना साथीलाई बचाउन आउँछ। सत्य भन्न सकिन्छ, उहाँसँग कुनै सुस्त क्षण छैन। एन्जेलिनो आफ्नो अह salary्कारको बानीमा संलग्न गर्न उनको ठूलो तलब अनुमति छैन।
कुनै श doubts्का छैन, उसको वार्षिक salary २. million मिलियन (२०२० तथ्या )्क) ले उनलाई विलासितापूर्ण जीवनशैली वहन गर्न सक्छ Javi Martinez। जे होस्, एन्जेलिनोले कम कुञ्जी जीवन बिताउने छनौट गर्‍यो। हामीलाई शंका छ कि सोनिराको पालनपोषण उसको खर्च बान्कीलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो।
प्रत्येक आगामी खेलाडीलाई २ at मा M मिलियन डलरको नेट वर्थ पाउने सुविधा छैन। तर हाम्रो बायाँ-फिर्ताले यो गर्यो। जब म यो बायो लेख्छु, एन्जेलिनो अधिक वित्तीय सफलता हासिल गर्ने दिशामा छ। यो ठूलो हो र स्पेनी राजनीतिज्ञहरूको सपना बाहिर।
एन्जेलिनो पारिवारिक जीवन:
एक पटक स्टारडमको लागि यात्रा कठिन भयो। जब स्पानियार्डले मान सिटीको साथ विरोधको कमीले निराश महसुस गरे, उनको सम्पूर्ण घर उनको खोजीमा थियो।
एग्लेनोले कहिल्यै निराश हुन सकेन किनभने उसको आमाबुबा, हजुरबा हजुरआमा, प्रेमिका र भाई उनको साथमा थिए। तसर्थ, हामी तपाईंलाई उसको परिवारको प्रत्येक सदस्यको बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दछौं।
व्यक्तिहरूसँग भेट्नुहोस् फुटबलरले उनको परिवारलाई बोलाउँदछन्।
एन्जेलिनो आमाको बारेमा:
Soneira Tasende Anon फुटबलर को गर्व आमा हो। एक्लो आमाको रूपमा, उहाँ आफ्ना दुई छोराको पालनपोषण गर्न अथक प्रयास गर्नुहुन्छ। एन्जेलिनोकी आमा यस्तो प्रकारको छ जसले आफ्ना छोरा जोसे एन्जेल र दानी आफैलाई जस्तै घर बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। अहिलेसम्म, एन्जेलिनोले उनलाई जत्तिको उत्तम सल्लाहकार र सल्लाहकार भएकोमा श्रेय दिन्छन्।
जोसे एन्जेल एके एन्जेलिनो सोनीरा, उनको आमाको साथ नाक समय लिएर।
एन्जेलिनो बुबाको बारेमा:
स्पेन संसारमा दोस्रो उच्चतम तलाक दर (60०%) को साथ, हामीलाई शंका छ कि एन्जेलिनोका बुबाले उनको आमासँग बिहान चाँडै बिच्छेद गरे। सायद यही कारण हो कि टेक्निकल ड्रिब्लरले आफ्नो बायोको कुनै पनि बिन्दुमा विरलै भनेका हुन्छन्।
एन्जेलिनो भाइको बारेमा:
देनी तासेन्डे बायाँ पछाडि एक मात्र भाई। यदि तपाईंलाई थाहा थिएन भने, उहाँ एक शान्त व्यक्तित्वको साथ एक पेशेवर खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। धेरै प्रेम र हेरचाह संग आफ्नो बचपन gracing को लागी दान Tasende आफ्नो ठूलो भाई को esणी छ। मैले यो बायो लेख्दा उहाँ २०१ 2016 देखि विलेरियल सीएफको लागि डेब्यू गरिसकेका छन्।
दानी तासेन्डे आफ्नो जीवनको भाई एन्जेलिनोको साथ तस्वीर लिन्छन्।
एन्जेलिनोको सम्बन्ध बारे:
हामी उसको हजुरबा हजुरआमालाई उसको सुखी पारिवारिक जीवनको तस्वीरबाट बाहिर राख्न सक्दैनौं। आफ्नो फुर्सदको अवधिमा, एन्जेलिनोले आफ्नो मामा हजुरआमा र हजुरबुबासँग केही गुणात्मक समय बिताउँदछन्। निस्सन्देह, उनका काका, काकी र काकीहरू र नजिकका आफन्तहरू उनको सफलतामा गर्व गर्छन्।
एन्जेलिनो अनटोल्ड तथ्यहरू:
आफ्नो जीवन कथा लपेट्न, यहाँ उहाँको बारेमा केहि सत्य छन्। यी तथ्यहरूले तपाईंलाई उनको जीवनीको पूरा ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
अनुसन्धानले देखाउँदछ कि औसत स्प्यानिश नागरिकले years बर्षसम्म काम गर्नुपर्नेछ जुन स्पेनीले एक महिनामा प्राप्त गर्छ।
तपाईंले एन्जेलिनो हेर्न सुरु गर्नुभयोबायो, यो उसले कमाएको हो।
तथ्य # १: एन्जेलिनो ट्याटूहरू:
एन्जेलिनो आफ्नो शरीरलाई उसको जर्नल मान्दछन्, जबकि ट्याटूहरूले उनको कथा भन्छ। मनपर्‍यो अल्भारो मोराटा, उहाँ आफ्नो शरीर मा धेरै सम्झनाहरु मसी गर्न मन पराउनुहुन्छ। निस्सन्देह, उनका शान्त ट्याटूहरू सँधै देखिन सक्दछन्, जब उनी पिचमा आवश्यक काम गर्न जर्सी लगाउँछन्।
एन्जेलिनो ट्याटूको प्रेमी हो।
तथ्य # १: एन्जेलिनो धर्म:
जब उनको इसाई विश्वासको कुरा आउँछ भने, एन्जेलिनो आफ्नो विश्वासबाट जोगिन चाहँदैनन्। ऊ क्याथोलिक हो र उसले आफ्नो प्रेमिका प्रेमिकासँग क्रिसमस मनाउँदा धेरै चोटि येशूप्रतिको आफ्नो गहिरो प्रेम देखायो।
समान स्तरमा मूल्या rated्कन भइरहेको फेरन टोरेस देखाउँदछ कि एन्जेलिनोले आफूलाई विश्व-स्तरीय उडन्ता प्रमाणित गरेको छ। उनको २०२० फिफा तथ्या .्कले देखाउँदछ कि उसको क्षमतामा बढी हामी उहाँसँग यस क्षणमा देख्छौं।
एन्जेलिनोको जीवन कहानीबाट हामी यो तथ्यलाई प्रमाणिकरण गर्न सक्दछौं कि उनले आफ्नो जीवनशैलीमा कहिले पनि हार मानेनन्, जब उनीसँग थोरै खेल्ने समय पनि थियो। अपेक्षित रूपमा, उनको पेट कहिल्यै छोड्ने छैन उहाँलाई प्रख्यात ज्योतिमा उनी सबै साथ चाहन्थे। यसमा धेरै विश्लेषकहरू छक्क पर्दैनन् एन्जेलिनो अब म्यान सिटीको बायाँ-पछाडिको समस्याको जवाफ हो.
सत्य भन्ने हो भने, उनका सबै उपलब्धिहरू असम्भव हुने थिए यदि एक परिवारका सदस्य - सोनिरा तासेन्डे अनन (उनको आमा) को समर्थनका लागि थिएनन्। चाँडै, उनले जोसे एन्जल र उनका भाइ डानी दुबै यस्तै सपनाहरू साझा गरेकी थिइन। यो अब एक उत्प्रेरक हो जसले सफलताको लागि उनीहरूको संकल्पलाई बढावा दियो।
हाम्रो बचपन कहानी र एन्जेलिनोको जीवनी पढ्नको लागि धन्यबाद। अरूसँग मिल्दोजुल्दो कथाहरूमा हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस् स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू.
कृपया यदि हामीलाई केहि फेला पार्नुहोस् जुन यो संस्मरणसँग सही जस्तो देखिदैन भने हामीलाई सूचित गर्नुहोस्। द्रुत पाठकहरूको लागि, एन्जेलिनोको जीवन कहानी हाम्रो विकी तालिकाको सारांश हेर्नुहोस्।
पुरा नाम: जोस एन्जेल एसमोरिस तासेन्डे
जन्मस्थान: Coristanco, स्पेन
आमा: Soneira Tasende Anon
Siblings: दानी तासेन्डे (भाई)
प्रेमिका / पति / पत्नी: रोसियो गलिंडा